नियमित यौनसम्पर्क (संभोग) गर्नेहरुको हृदयघातबाट मृत्यु हुने सम्भावना न्यून। - Malayakhabar
होम पेज फिचर नियमित यौनसम्पर्क (संभोग) गर्नेहरुको हृदयघातबाट मृत्यु हुने सम्भावना न्यून।
नियमित यौनसम्पर्क (संभोग) गर्नेहरुको हृदयघातबाट मृत्यु हुने सम्भावना न्यून।
एजेन्सी:= बुढ्यौली र दीर्घायु हुनु कसैको बसमा हुँदैन । विज्ञानका अनुसार पढाई, व्यायाम गर्नु र स्वस्थकर खाना खानु नै एक स्वस्थ जीवनका लागि आवश्यक चीज हुन् । तर, पछिल्लो समय अनुसन्धानकर्ताका अनुसार शारीरिक सम्बन्ध पनि अत्यन्त आवश्यक छ ।
अनुसन्धानकर्ताका अनुसार शारीरिक सम्बन्धले थुप्रै गम्भीर बिरामीहरुको खतराबाट बचाउँछ । शारीरिक सम्बन्धले सन्तुष्टि मात्र दिँदैन यसले दिमागी रुपमा पनि तन्दुरुस्त राख्छ । यसले रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ । उच्च रक्तचापलाई सन्तुलनमा राख्न र मुटुसम्बन्धी थुप्रै समस्याहरुबाट बच्नुका साथै लामो उमेरका लागि पनि शारीरिक सम्बन्ध राख्नु जरुरी छ ।
न्यू इंग्लयाण्ड रिसर्च इन्स्टिच्युटका अनुसन्धानकर्ताका अनुसार शारीरिक सम्बन्ध र मुटुका रोगहरुसँग सम्बन्धित एक अनुसन्धान गरिएको थियो । जसमा ६५ वर्षभन्दा कम उमेरका १ हजार १ सय २० जना पुरुष र महिलाहरु सहभागी थिए । यस अनुसन्धानका अनुसार २२ वर्षपछि आएको नतिजाका अनुसार हरेक दिन शारीरिक सम्बन्ध राखेमा मुटुसम्बन्धी रोग लाग्दैन ।
अनुसन्धानका अनुसार ‘सेक्स लाइफ’ सक्रिय हुनेहरुको हृदयघातपछि पनि मृत्यु हुने सम्भावना कम हुन्छ । जसले एक हप्तामा एकभन्दा बढी पटक सेक्स गर्छ त्यस्ता व्यक्तिको हृदयघातबाट मृत्यु हुने सम्भावना २७ प्रतिशत कम हुन्छ । यद्यपि, सेक्स नगर्नेहरुको मृत्यु हुने सम्भावना ८ प्रतिशत मात्रै कम हुन्छ ।
यसमा शारीरिक सम्बन्ध राख्दा पार्टनरको लगावमा पनि भर पर्ने अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, हप्तामा एक पटक सेक्स गर्नेको उमेर ३७ प्रतिशत लामो हुन्छ । अमेरिकी जर्नल अफ कार्डियोलोजीमा छापिएको एक अध्ययनका अनुसार सेक्सले उमेर लम्ब्याउँछ । उक्त अध्ययनका अनुसार सेक्स कम गर्ने पुरुषमा मुटुको रोग लाग्ने खतराका साथै इरेक्टाइल डिसफंक्शनको समस्या पनि बढाउँछ । साथै, यौन क्रियाकलापमा सक्रिय हुने पुरुषमा शारीरिक सक्रियता बढाउने क्षमता धेरै हुन्छ ।
अघिल्लो लेख बिहेअघिको त्यो ‘गल्ती’
पछिल्लो लेख ६४ हजार ४ सय २२ लाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइयो।
गायिका अन्जु पन्तले गरिन् प्रेमी थिर कोइरालासँग बिहे।
प्रचण्ड-माधव र जसपा नेताहरु बीचको भेट : प्रचण्ड-माधव पक्षको पार्टी कुन हो ? जसपाको प्रश्न !
सबिनाको उपचारको लागि मलेसियाबाट आर्थिक सहयोग प्रदान।
मलाया खबर न्युज डेस्क - February 25, 2021
काठमाडौं := लोकप्रिय गायिका अन्जु पन्तले बिहे गरेकी छन् । पन्त आफ्ना प्रेमी थिर कोइराला वैवाहिक जीवनमा बाँधिएकी हुन । एक बर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा...
प्रचण्ड-माधव र जसपा नेताहरु बीचको भेट : प्रचण्ड-माधव पक्षको पार्टी कुन हो ? जसपाको...
काठमाडौं:= नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) प्रचण्ड–माधव पक्ष र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेताहरुबीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको छ । बिहीबार नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडाँमा नेकपा...
पाँचथर := आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी पाँचथरको फिदिम नगरपालिका वडा न. २ ठाँडे निवासी १७ वर्षिया सबिना तुम्बापोलाई उपचारको निम्ति फाल्गुनन्द एकता समाज मलेसियाले...
नेदरल्यान्डमा मार्च १५ सम्म लम्बियो कर्फ्युको अवधि।
एजेन्सी := कोरोमा सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि नेदरल्याण्डमा लगाइएको कफ्र्युको समय बढाएको छ । पछिल्लो जानकारी अनुसार त्यहाँका अधिकारीहरुले कोभिडका कारण लगाइएको कफ्र्युको समय पनि...
अभिनेता भुवन केसी भन्छ्न : ‘न्यायमूर्तिहरूलाई मेरो सलाम छ’
काठमाडौं:= संविधानको रक्षा गर्दै सर्वोच्चले गरेको फैसला स्वागत योग्य भएको भन्दै यतिबेला राजनीतिक दल तथा आमनागरिकले खुशीयाली मनाइरहेको देखिन्छ । यसैबीच नेपाली कलाकारहरूले पनि...